# 1 प्रश्न खोज ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको व्यवसाय बारे सोध्छन् Martech Zone
मङ्गलबार, जनवरी 6, 2015 मङ्गलबार, जनवरी 6, 2015 Douglas Karr
२०१ 2014 मा, गुगलमा सबै खोजीहरू बाहिर, कसरी # 1 शब्द खोज ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरेको थियो। हरेक उत्पादन वा सेवा ईन्टरनेटमा बेचे उत्तर कसरी। प्रश्न यो हो कि तपाइँ गनिरहेका जानकारीको लागि तिनीहरू खोजी गर्दैछन्।
यदि तपाईं खेलकुद पेय हुनुहुन्छ भने, यो कसरी हुन सक्छ क्रम्पसँग कसरी व्यवहार गर्ने, वा कसरी आफ्नो शरीरलाई कडा कसरतको लागि तयार गर्ने। यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ विश्लेषण कम्पनी, कसरी हुन सक्छ सही डेटा विश्लेषण गर्न को लागी तपाइँको अभियानहरु को लागी लगानी डेटा मा प्रतिफल प्रदान गर्न। यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ इन्फोग्राफिक डिजाइनर, कसरी प्रदायक चयन गर्न वा प्रभावी ढ an्गले एक इन्फोग्राफिक प्रचार कसरी गर्न सकिन्छ।
केही कम्पनीहरूले यसको बारेमा कुरा गर्दैनन् कसरी किनभने तिनीहरू आफ्नो व्यापार रहस्य अनलाइन राख्ने बारे चिन्तित छन्। यो एक दुधारी तरवार हो जुन म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु कि तपाई आफैंलाई चोट पुर्याइरहनु भएको छ। यदि तपाइँ कसरी खुलासा गर्नुहुन्न भने, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूसँग अवसर छ। पूर्ण मूल्यांकन गर्न सक्षम हुनु कसरी उनीहरूले समस्या समाधान गर्छन् उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्दछ।
र यो दिन र उमेरमा, यदि तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न कि उनीहरूको खोज खरीद गर्न खोज्ने मानिस फेला पार्न सक्दैन कसरी तपाई यो गर्नुहुन्छ, तपाई खुशी हुनुहुन्छ। म अझ धेरै लेख्न चाहन्छु कि कसरी हामी समस्याहरू सुधार्छौं र हाम्रा ग्राहकहरूको लागि समस्याहरू समाधान गर्ने छौं प्रतिस्पर्धीहरूले हाम्रो प्रस्ताव गलत तरीकाले राखेका छन्। हामीले हाम्रो उद्योगमा यस्तै देख्यौं।
त्यसोभए, जब तपाईं आफ्नो कम्पनीको लागि २०१ 2015 सामग्री बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ टनहरू छन् कसरी प्रश्नहरू तपाईं अनलाइन जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।
कसरी एक विक्रेता चयन गर्न (र किन तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ)।
कसरी खर्च औचित्य (र हुनसक्छ तपाईं कसरी अधिक सस्तो हुनुहुन्छ)।
कसरी समाधान मूल्यांकन गर्न (र कसरी तपाईंको समाधान मिल्दछ)।
कसरी समस्या समाधान गर्न को लागी (तपाईको भिन्नता बुझ्नको लागि र तपाईको समाधानको साथ)।
कसरी उद्योग परिवर्तन हुँदैछ (र तपाईं शीर्षमा रहिरहनु भएको छ)।
कसरी बाह्य कारक (अर्थव्यवस्था, प्रतिभा, प्रविधि) समाधानलाई प्रभाव पार्दछ।
कसरी तपाईं प्रतिक्रिया गर्न योग्य हुनुहुन्छ (प्रमाणपत्र, नियम, पूर्वाधार)।
कसरी यसको लागि धेरै संसाधनहरू आवश्यक छन् (र कसरी तपाइँ यसलाई कम गर्नुहुन्छ)।
कसरी धेरै यसको लागत (र तपाइँ कसरी प्रभावकारी रूपमा मूल्य)।
जवाफ दिने बारेमा सब भन्दा ठूलो कुरा कसरी प्रश्नहरू के तपाईं समाधानमा मद्दतको लागि तपाइँको कम्पनी, तपाइँको उत्पादन वा तपाइँको सेवा प्रभावी रूपमा स्थिति गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। पक्का, यदि तपाईं उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कसरी हार्डवुड फ्लोर स्थापना गर्न, कोहीले यसलाई आफैंको निर्णय गर्न सक्छ। तर एक प्रभावकारी कसरी लेखमा किन यसलाई राम्रो छ एक पेशेवर प्राप्त गर्न को लागी राम्रो विचार प्रदान गर्न को लागी महान विस्तार मा जान्छ।
DIYs जे भए पनि तपाईंको सेवा प्रयोग गर्दैन, तपाईं अनुसन्धान गरिरहनुभएको व्यक्ति कत्ति गाह्रो छ पछि हुनुहुन्छ।
टैग: जवाफकसरीकसरी जवाफकसरी उदाहरणहरुकसरी प्रश्नकसरीखोज प्रश्न
जनवरी १, २०१ 13 १२::2015 अपराह्न
धन्यवाद, डगलस, सामग्री विचारलाई "कसरी" भन्ने सम्भावित सूचीको साझेदारी गर्नका लागि; यसले मलाई धेरै उत्कृष्ट विचारहरू दियो!
तपाईं जोआना स्वागत छ! टिप्पणी दिन समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद!